ဒီကစားသမားတွေ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ နံပါတ်တွေက တကယ့်ကို ရယ်စရာပါပဲ
ကစားတဲ့နေရာနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ ကျောနံပါတ်ပိုင်ရှင် ကစားသမားများ
26 Oct 2018 . 12:27 PM
ဘောလုံးအားကစား စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ ခေတ်ဦးပိုင်းမှာ ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းရဲ့ ကျောနံပါတ်တွေက ရိုးရှင်းလွန်းပါတယ်။ ဂိုးသမားက စလို့ ရှေ့တန်းအထိ (၁၊၂၊၃၊၄) အစဉ်အလိုက် သတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ မော်ဒန်ဘောလုံးလောကရောက်မှ နံပါတ်တွေက အထူးအဆန်းတွေဖြစ်လာပြီး ဘရာဇီးလ်ဂန္ထ၀င် ရော်နယ်လ်ဒို Ronaldo ဆိုရင် အေစီမီလန်မှာ ကစားတုန်းက နံပါတ် (၉၉) ၊ ရော်နယ်လ်ဒင်ဟို Ronaldinho ဆိုရင်လည်း (၈၄) ၀တ်ဆင်ခဲ့သလို ဘာလိုတယ်လီ Balotelli က နံပါတ်(၄၅)ကို အင်တာမီလန်၊ မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်၊ အေစီမီလန်တို့မှာ ၀င်ဆင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကစားတဲ့နေရာနဲ့ မသတ်ဆိုင်ဘဲ ထူးထူးခြားခြား ကျောနံပါတ်တွေ ၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် . . .
ဂျိုနသန်ဒီဂတ်ဇ်မန်း Jonathan De Guzman (နံပါတ် -၁)
နံပါတ်(၁)ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ မြင်ယောင်မိတာက ဂိုးသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျိုနသန်ဒီဂတ်ဇ်မန်းကတော့ ထူးထူးခြားခြားပဲ ချီယေဗိုအသင်းမှာ ကျောနံပါတ်(၁)ကို ၀တ်ဆင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီလို နံပါတ်(၁)ကို နယ်သာလန်ဂန္ထ၀င် အက်ဂါဒေးဗစ် Edgar Davids လည်း ဘားနက်အသင်းမှာ ကစားခဲ့တုန်း ၀င်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
၀က်ဂ်နာ Sandro Wagner (နံပါတ် -၂)
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တိုက်စ်စမှူး ၀က်ဂ်နာရဲ့ နံပါတ်ကလည်း အံ့သြစရာကြီးပါ။ ကျောနံပါတ်(၂)ဆိုတာက Full Backs တွေ ၀တ်ဆင်တာဖြစ်ပေမယ့် ၀က်ဂ်နာက ဒီနံပါတ်ကို ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ချိန်မှာ ၀တ်ဆင်ခဲ့တယ်။ တချို့ကတော့ ၀က်ဂ်နာဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို ဒုတိယအကြိမ်ပြောင်းတာဖြစ်လို့ နံပါတ်(၂) ၀တ်တာလို့ သုံးသပ်ပေမယ့် အဓိပ္ပါယ်တော့ သိပ်မရှိပါဘူး။
အဆာမိုဂျန် Asamoah Gyan (နံပါတ် -၃)
ဆန်းဒါးလန်းနဲ့ ဂါနာ နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူးကြီး အဆာမိုဂျန်ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိဦးမှာပါ။ ဆန်းဒါးလန်းအသင်းမှာ ကျောနံပါတ်(၃)ဂျာစီနဲ့ ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့သူ၊ ဂါနာအသင်းမှာလည်း အဲဒီနံပါတ်နဲ့ပဲ ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆာမိုဂျန်ဟာ အဲဒီနံပါတ်(၃)ကို အကြောင်းမဲ့ ရွေးချယ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့အကြောင်းပြချက်က ရယ်စရာတော့ကောင်းတယ်။ “ကျွန်တော် ဂါနာမှာ ကစားကတည်းက နံပါတ်(၃)ဂျာစီကို ၀တ်ဆင်ခဲ့တာဗျ။ အဲဒီနံပါတ်က Power ကြီးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လေးတဲ့ အရာတွေကို မ’မ’ခင် (၁)ကနေ (၃)အထိ ရေတွက်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီလိုပဲ တစ်ယောက်ယောက်ကို မကျေနပ်လို့ သတိပေးရင် ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် သတိပေးမယ်၊ တတိယအကြိမ်မှာတော့ တွယ်လိုက်တာပဲ မဟုတ်လား”တဲ့။
ကနူး Nwankwo Kanu (နံပါတ်-၄)
တစ်ချိန်က အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှာ ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တဲ့ ကနူးကလည်း နိုက်ဂျီးရီးယားအသင်းမှာ နံပါတ်(၄)ဂျာစီ ၀တ်ဆင်ကစားခဲ့ဖူးတယ်။ Centre-backs ဒါမှမဟုတ် ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးဦး ဒီနံပါတ်ကို ၀တ်ဆင်တာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်က ၀တ်ဆင်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်ပါဘူး။
ဘားရို့စ် Milan Baros (နံပါတ်-၅)
ပြင်သစ်ဂန္ထ၀င် ကစားသမား ဇီဒန်း Zidane ဟာ ရီးယဲလ်အသင်းမှာတုန်းက ကျောနံပါတ် (၅)အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့တယ်။ သူ့လိုပဲ ကျောနံပါတ်(၅)ဂျာစီနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သူက လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း မီလန်ဘားရို့စ်ပါပဲ။ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားတွေ ရယူခဲ့ပြီး ဘားရို့စ်နောက်ပိုင်း နံပါတ်(၅)အင်္ကျီကို ၀င်ဆင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေ သိပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။
ဟက်ကာဘီ Darren Huckerby (နံပါတ်-၆)
၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုန်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေကို မီလိုက်တဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ နောဝစ်ခ်ျတိုက်စစ်မှူး ဟက်ကာဘီကို မှတ်မိကြဦးမယ်ထင်တယ်။ တိုက်စစ် ကစားသမားဖြစ်ပေမယ့် ကျောနံပါတ်(၆)ဂျာစီ ၀တ်ဆင်ကစားခဲ့တဲ့ ဟက်ကာဘီဟာ အဲဒီအချိန်တုန်းက ပရိသတ်တွေရဲ့ အမြင်မှာ ထူးခြားခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။
ကစားတဲ့နေရာနဲ့ မအပ်စပ်တဲ့ ကျောနံပါတ်ပိုင်ရှင် ကစားသမားများအကြောင်းကို အခုလောလောဆယ် အပိုင်း (၁)အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါဦး . .
ကစားတဲ့နရောနဲ့ မအပျစပျတဲ့ ကြောနံပါတျပိုငျရှငျ ကစားသမားမြား
ဘောလုံးအားကစား စတငျဖှံ့ဖွိုးလာတဲ့ ခတျေဦးပိုငျးမှာ ဘောလုံးအသငျးတဈသငျးရဲ့ ကြောနံပါတျတှကေ ရိုးရှငျးလှနျးပါတယျ။ ဂိုးသမားက စလို့ ရှတေ့နျးအထိ (၁၊၂၊၃၊၄) အစဉျအလိုကျ သတျမှတျပေးလိုကျတာပါပဲ။ မျောဒနျဘောလုံးလောကရောကျမှ နံပါတျတှကေ အထူးအဆနျးတှဖွေဈလာပွီး ဘရာဇီးလျဂန်ထဝငျ ရျောနယျလျဒို Ronaldo ဆိုရငျ အစေီမီလနျမှာ ကစားတုနျးက နံပါတျ (၉၉) ၊ ရျောနယျလျဒငျဟို Ronaldinho ဆိုရငျလညျး (၈၄) ဝတျဆငျခဲ့သလို ဘာလိုတယျလီ Balotelli က နံပါတျ(၄၅)ကို အငျတာမီလနျ၊ မနျစီးတီး၊ လီဗာပူးလျ၊ အစေီမီလနျတို့မှာ ဝငျဆငျခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျကစားတဲ့နရောနဲ့ မသတျဆိုငျဘဲ ထူးထူးခွားခွား ကြောနံပါတျတှေ ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျတာဖွဈပါတယျ . . .
ဂြိုနသနျဒီဂတျဇျမနျး Jonathan De Guzman (နံပါတျ -၁)
နံပါတျ(၁)ဆိုရငျ ပရိသတျတှေ မွငျယောငျမိတာက ဂိုးသမားပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဂြိုနသနျဒီဂတျဇျမနျးကတော့ ထူးထူးခွားခွားပဲ ခြီယဗေိုအသငျးမှာ ကြောနံပါတျ(၁)ကို ဝတျဆငျခဲ့တယျ။ အဲဒီလို နံပါတျ(၁)ကို နယျသာလနျဂန်ထဝငျ အကျဂါဒေးဗဈ Edgar Davids လညျး ဘားနကျအသငျးမှာ ကစားခဲ့တုနျး ဝငျခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဝကျဂျနာ Sandro Wagner (နံပါတျ -၂)
ဘိုငျယနျမွူးနဈတိုကျဈစမှူး ဝကျဂျနာရဲ့ နံပါတျကလညျး အံ့သွစရာကွီးပါ။ ကြောနံပါတျ(၂)ဆိုတာက Full Backs တှေ ဝတျဆငျတာဖွဈပမေယျ့ ဝကျဂျနာက ဒီနံပါတျကို ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးဆီ ပွောငျးရှခြေိ့နျမှာ ဝတျဆငျခဲ့တယျ။ တခြို့ကတော့ ဝကျဂျနာဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးကို ဒုတိယအကွိမျပွောငျးတာဖွဈလို့ နံပါတျ(၂) ဝတျတာလို့ သုံးသပျပမေယျ့ အဓိပ်ပါယျတော့ သိပျမရှိပါဘူး။
အဆာမိုဂနျြ Asamoah Gyan (နံပါတျ -၃)
ဆနျးဒါးလနျးနဲ့ ဂါနာ နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူးကွီး အဆာမိုဂနျြကို ပရိသတျတှေ မှတျမိဦးမှာပါ။ ဆနျးဒါးလနျးအသငျးမှာ ကြောနံပါတျ(၃)ဂြာစီနဲ့ ဂိုးတှေ သှငျးယူခဲ့သူ၊ ဂါနာအသငျးမှာလညျး အဲဒီနံပါတျနဲ့ပဲ ခွစှေမျးပွခဲ့တဲ့ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပါတယျ။ အဆာမိုဂနျြဟာ အဲဒီနံပါတျ(၃)ကို အကွောငျးမဲ့ ရှေးခယျြထားတာ မဟုတျပါဘူး။ သူ့အကွောငျးပွခကျြက ရယျစရာတော့ကောငျးတယျ။ “ကြှနျတျော ဂါနာမှာ ကစားကတညျးက နံပါတျ(၃)ဂြာစီကို ဝတျဆငျခဲ့တာဗြ။ အဲဒီနံပါတျက Power ကွီးတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ လေးတဲ့ အရာတှကေို မ’မ’ခငျ (၁)ကနေ (၃)အထိ ရတှေကျတယျ မဟုတျလား။ အဲဒီလိုပဲ တဈယောကျယောကျကို မကနြေပျလို့ သတိပေးရငျ ပထမအကွိမျ၊ ဒုတိယအကွိမျ သတိပေးမယျ၊ တတိယအကွိမျမှာတော့ တှယျလိုကျတာပဲ မဟုတျလား”တဲ့။
ကနူး Nwankwo Kanu (နံပါတျ-၄)
တဈခြိနျက အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှာ ခွစှေမျးပွကစားခဲ့တဲ့ ကနူးကလညျး နိုကျဂြီးရီးယားအသငျးမှာ နံပါတျ(၄)ဂြာစီ ဝတျဆငျကစားခဲ့ဖူးတယျ။ Centre-backs ဒါမှမဟုတျ ကှငျးလယျလူတဈဦးဦး ဒီနံပါတျကို ဝတျဆငျတာ ကိစ်စမရှိပမေယျ့ တိုကျစဈမှူးစဈစဈက ဝတျဆငျရငျတော့ ဘယျလိုမှ မအပျစပျပါဘူး။
ဘားရို့ဈ Milan Baros (နံပါတျ-၅)
ပွငျသဈဂန်ထဝငျ ကစားသမား ဇီဒနျး Zidane ဟာ ရီးယဲလျအသငျးမှာတုနျးက ကြောနံပါတျ (၅)အင်ျကြီကို ဝတျဆငျပွီး အောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့တယျ။ သူ့လိုပဲ ကြောနံပါတျ(၅)ဂြာစီနဲ့ အောငျမွငျခဲ့သူက လီဗာပူးလျတိုကျစဈမှူးဟောငျး မီလနျဘားရို့ဈပါပဲ။ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျ၊ လိဂျဖလားတှေ ရယူခဲ့ပွီး ဘားရို့ဈနောကျပိုငျး နံပါတျ(၅)အင်ျကြီကို ဝငျဆငျတဲ့ တိုကျစဈမှူးတှေ သိပျမတှရေ့တော့ပါဘူး။
ဟကျကာဘီ Darren Huckerby (နံပါတျ-၆)
၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုနျးက ပရီးမီးယားလိဂျပှဲတှကေို မီလိုကျတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ နောဝဈချြတိုကျစဈမှူး ဟကျကာဘီကို မှတျမိကွဦးမယျထငျတယျ။ တိုကျစဈ ကစားသမားဖွဈပမေယျ့ ကြောနံပါတျ(၆)ဂြာစီ ဝတျဆငျကစားခဲ့တဲ့ ဟကျကာဘီဟာ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ပရိသတျတှရေဲ့ အမွငျမှာ ထူးခွားခဲ့တာတော့ အမှနျပါပဲ။
ကစားတဲ့နရောနဲ့ မအပျစပျတဲ့ ကြောနံပါတျပိုငျရှငျ ကစားသမားမြားအကွောငျးကို အခုလောလောဆယျ အပိုငျး (၁)အဖွဈ ဖျောပွလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျဖျောပွသှားမှာဖွဈလို့ ပရိသတျတှေ စောငျ့မြှျောဖတျရှုကွပါဦး . .